Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9.1 Beta kuenda kuIOS 9.0 | IPhone nhau
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9.1 Beta kuenda kuIOS 9.0
Nezuro Apple yakaburitsa iOS 9 mune yayo yekupedzisira vhezheni, kune vese iPhone, iPad uye iPod Kubata vashandisi. Kugadzirisazve iyi vhezheni itsva kuri nyore sekuwana marongero edhizaisi uye kushandisa iyo yekuvandudza kuburikidza neOTA, kana kubatanidza iTunes uye nekudzvanya kugadzirisa. Asi kana iwe uri mumwe wevaya vari paIOS 9.1 Beta, iyo vhezheni yakaburitswa neApple yePublic Betas chirongwa icho vazhinji venyu makanyoresa, chinhu hachisi nyore uye kune vazhinji venyu vatibvunza paTwitter uye pane iyo blog maitiro ekudzikisira kuIOS 9.0. Isu tinotsanangura nhanho nhanho maitiro ekuzviita.
1 Dhawunirodha iOS 9.0 yefoni yako
2 Negadziriro yeparutivi mudziyo wako
3 Ita shuwa kuti ako mafoto uye mavhidhiyo anotorwa pasi
4 Unganidza yako iPhone kune komputa uye vhura iTunes
5 Gadzira chishandiso chako chitsva
Dhawunirodha iOS 9.0 yefoni yako
Ini ndinokurudzira kushandisa faira ratotorwa kare kukombuta yako. Ichagadzirisa mashandiro uye iwe uchavewo nazvo kune dzimwe nguva kana zvichidikanwa. Zvese iOS 9.0 zvekuburitsa zvinongedzo zviripo kune ese majaira en ichi chinyorwa. Sarudza yako uye mirira nemoyo murefu kuti vatore pakombuta yako. Ipo ichirodha pasi iwe unogona kuenderera nematanho anotevera.
Negadziriro yeparutivi mudziyo wako
MuICloud kana muTunes, asi chete kana paine chero zvikanganiso panguva yekuita, nekuti hauzokwanisi kushandisa iOS 9.1 backup pane iOS 9.0. Iyi diki "tsananguro" iyo vazhinji vanokanganwa kutaura inogona kuve yakakosha kwauri, saka chengeta mundangariro usati waenderera.
Ita shuwa kuti ako mafoto uye mavhidhiyo anotorwa pasi
Rangarira kuti mudziyo wako uchave wakachena uye usingakwanise kudzoreredza backup, saka mavhidhiyo ako ese uye mafoto akachengetwa mairi achanyangarika. Ita shuwa kuti waakodhaunirodha kukomputa yako usati waenderera mberi nekudzoreredza maitiro.
Unganidza yako iPhone kune komputa uye vhura iTunes
Iyo yekudzorera maitiro inotanga chaizvo: batanidza yako iPhone kana iPad kune komputa uchishandisa yekutanga mheni tambo (yakakurudzirwa) kana zvirinani yakasimbiswa uye mirira iTunes kuti rione. Kamwe kana yako iPhone kana iPad ikaonekwa, enda kuChidimbu skrini.
Mune akawanda maitirwo zvinoratidza kuti zvakafanira kuisa iyo iPhone kana iPad muKudzoreredza modhi. Izvo hazvidi kuita, Uye ndakaiongorora pachangu neangu iPhone 6 Plus, asi kana maitiro acho akatadza kana iwe usiri kuda kuzviisa panjodzi, unogona kuzviita usati wadzvanya bhatani rekudzorera. Kuisa chishandiso chako muKudzoreredza mode yakapusa.
Bvisa kifaa chako
Unganidza iyo pakombuta yako paunenge wakabata pasi bhatani rekutanga (iyo yakatenderera) uye usasunungure.
Kana mufananidzo wetambo uye chiratidzo cheTunes chikaonekwa pachiratidziro chemuchina wako, buritsa bhatani repamba. Meseji iyo iPhone / iPad yakaonekwa mukudzosa modhi inofanira kuoneka muTunes. Kana zvisiri, dzokorora maitiro zvakare.
Kana iwe uri mune yekudzoreredza modhi kana kana iwe wafunga kutsika danho iri zvino ndiyo nguva yekudzoreredza. Dzvanya pane bhatani re "Dzosera" asi paunenge wakabata pasi kiyi "Alt" (pane OS X) kana "Shift (paWindows). Iwindo rinovhura umo iwe uchakumbirwa kusarudza iyo firmware faira yekuisa. Wobva wasarudza iyo faira yawakadhinda mudanho rekutanga redzidziso iyi, uye mirira kuti maitiro apedze.
Gadzira chishandiso chako chitsva
Iwe watove muIOS 9 asi sezvatakaratidza kare hauzokwanisi kushandisa iyo backup. Kunyange iyo WhatsApp yaindibvumidza kurodha nhaurwa dzandakange ndachengeta kubva kuICloud. Ino inguva yekugadzirisa chishandiso chako kubva pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9.1 Beta kuenda kuIOS 9.0
Kashoma topper akadaro
Pane imwezve nzira ndizvo zvandakaita uye iwe usabvisa chero chinhu. Kutanga iwe unobvisa chimiro kubva kuruzhinji betas mune zvese. Iyi ndiyo iyo yakakubvumidza iwe kuisa yeruzhinji beta. Hapana chikonzero chekutangazve. Wobva warodha pasi yakazara iOS 9 yeiyo chaiyo terminal (pamusoro apa pane zvinongedzo). Paunenge uchinge watora pasi, izvo zvaunofanirwa kuita ndezvekuti, muTunes, pane kurova kudzoreredza, iwe unozvipa kuti zvivandudzwe nekiyi yekuchinja muWindows uye wonongedzera kufaira rakadzingwa. Uye maitiro acho anotanga. Sezvo iwe zvawakaipa kuti ivandudze, panzvimbo yekudzorera, zvinoitwa iTunes kuderera kubva kubeta reIOS 9.1 kusvika ios 9.0. Uye kana ichinge yapera une nhare imwechete sepakutanga asi ios9.
Pindura kuHarely topper
Chikunguru NH akadaro
Dai ndakange ndakuverenga kare, zvaizondinunura iyo hellish kumirira kudzoreredza maapplication ese akaiswa, kuagarisa, kupinda mukati, nezvimwe…. Ndichazviedza pane chimwe chigadzirwa. Ndatenda!
Pindura kuna Julio NH
Ini handikurudzire iyi nzira yekudzikisira kubva kune beta isina kugadzikana seIOS 9.1 kuenda kuIOS 9.0. Izvo zvinoshanda, asi mikana yezvikanganiso, glitches, uye zvakajairika malfunctions zvakakwirira kwazvo.
@Harely Topper, uye ndinobvisa sei chimiro kubva kuruzhinji betas?
alexander vazquez akadaro
Ini ndinowana kuti haina kukwanisa kugadzirisa nekuti iyo faira haina kutsigirwa
Pindura kuna alexander vazquez
#Harely ndatevera mirairo yako uye zvakaringana, ipapo ndakaita kopi uye ndadzoreredza kuitira kuti kuiswa kwakazara kweIOS 9.0 uye maApplication ese kugadzirwa. Kutenda kwazvo.
Ivo havafanirwe kumirira iyo yakareba zvakadaro, kana kudzoreredza, kana kurasikirwa neruzivo. Ingo isa yako iphone, ipods, ipads mune yekudzoreredza mode (kudzvanya bhatani rekutanga uye bhatani rekuvhara kwemasekondi gumi nemashanu uyezve bhatani rekutanga kwemasekonzi mashanu) kana iko icon yeitunes yaonekwa, paitunes uchawana mukana wekumutsiridza iyo yepamutemo ios 15.
iyo ios nyowani (9.0.2) inounza zvikanganiso zvakawanda ... inonamira pandinonyora uyezve pandinopinda kodhi yekuchengetedza uye ndozvazviri.
Ricardo Guerrero akadaro
Kana ndiine matambudziko mazhinji neIOS 9.1 beta 3 ini ndatoziva kuti nei ndakaigadziridza uye yanga isiri yekuchenesa kumisikidza, ini ndoda kuidzosera kuti ndigadzirise zvakare, kana ndikaita backup pandakanga ndiri mubeta 3, pandinodzorera uye kuisazve beta 3 munzira yakachena ini ndinogona kudzoreredza iyo backup chaiko?
Pindura Ricardo Guerrero
Ana pau akadaro
Ini ndinowana iyo ziviso yekuita iyo nyowani yekuvandudza kune ios 9.1 asi pandinoda kuiisa, zvinondiudza kuti pane kukanganisa uye kuyedza zvakare asi hazvindibvumidze, ndoitei?
Pindura Ana pau
Bastian R akadaro
Mhoroi, ndine iPhone 5 uye ndatevera nhanho dzese uye ini ndichiri kuwana kukanganisa kana ndichiedza kuidzosa: / kutanga ini ndinowana "Kuburitsa software" uye ndobva ndawana kuti yaisakwanisa kudzoserwa uye blah blah, chii ndingaita here? Ndakatsvaga internet ndikabuda zvikanzi ndaifanirwa kudzima mamwe ma host ndikazviita, ndoita sei?
Pindura Bastián R
Ehe, 3D Kubata kunogona kushandiswa nevanodzivirira screen
Zvikonzero zvekusachinja iyo iPhone 6 yeiyo iPhone 6s